होमपेज / शुक्रबार / 'म पनि सेलिब्रिटी भइसकिछु!'
'म पनि सेलिब्रिटी भइसकिछु!'	19 May 2013 आइतबार ५ जेष्ठ, २०७०
उपत्यकाबाहिरको यात्रा कस्तो रह्यो?असाध्यै रमाइलो। धेरै नयाँ ठाउँमा घुमियो। फरक सोच भएका मान्छेहरूसँग भेटियो। यसअघि काठमाडौँ बाहिर गइएको थिएन?पश्चिममा त एकचोटि प्रोग्राम टुरमा गएकी थिएँ, साल्सा डान्स देखाउन। तर, पूर्वका धेरै ठाउँ गएको थिइनँ। तपाईंप्रति त्यहाँका दर्शकको दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभयो?वाह! हाम्रो कामको मूल्यांकन गर्ने दर्शक त उपत्यकाबाहिरै रहेछन्। म पनि सेलिब्रिटी भइसकेछु भन्ने महसुस बल्ल भएको छ। काम गर्ने ऊर्जा पनि थपिएको छ। म्युजिक भिडियोमा हेरेर मात्रै पनि त्यस्तो रेस्पोन्स पाउनुभएछ। फिल्म रिलिज भएपछि कस्तो होला?त्यही त, ६० वटा म्युजिक भिडियो खेलिसकेँ। केही उपलब्धि छैन जस्तो लागेर मन खिन्न हुन्थ्यो। काठमाडौँमा प्रशंसकले धेरै प्रशंसा गरे भने 'राम्रो छ' भन्थे। तर, बाहिर त हामीसँग तस्बिर खिचाउन पाएकैमा गर्व गर्ने दर्शक पनि रहेछन्। फिल्म रिलिज भएपछि गएको भए अझै बढ्थे होलान्।रिलिज हुन लागेको फिल्म 'अन्तराल'मा प्रशंसक बढ्ने खालको रोल छ कि छैन?गज्जबले छ। आफ्नै खुट्टामा उभिएकी, हेल्पफुल र सकारात्मक सोच भएकी खुला विचारकी केटीको भूमिका छ। यस्तो मान्छेलाई सबैले मन पराउँछन्। फिल्मकी 'त्यो केटी' र तपाईंबीच कत्तिको समानता छ?छन्, थुप्रै समानता छन्। एक्काइसौँ शताब्दीका प्रायः केटी खुला विचारका हुन्छन्, म पनि छु। मोडलिङ र अभिनयसँगै बुटिक पनि सञ्चालन गरिरहेकी छु।बुटिकमा बस्न भ्याइन्छ?अहिले त्यति भ्याएकी छैन। अब समय दिने कोसिस गर्दैछु। यो क्षेत्रमा गरिखान गाह्रो भएर व्यवसायतिर लागेको हो?म मोडल/हिरोइनमात्रै होइन, त्योभन्दा राम्रो साल्सा परफर्मर हो। त्यसैले मलाई त्यस्तो गाह्रो छैन। तर, भविष्यका बारेमा पनि अहिल्यै सोचिराख्नुपर्छ भनेर व्यवसाय पनि थालेकी हुँ।नेपालमा साल्सा परफर्मरको डिमान्ड राम्रै छ त?परफर्मरको कमी भएकाले डिमान्ड हाई छ। विशेष गरेर ठूला व्यावसायिक कम्पनीले आफ्नो उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि साल्सा परफर्मरलाई प्रयोग गर्न थालेका छन्। फिल्म र म्युजिक भिडियोमा तपाईंको त्यो कला देखिएको खोइ?त्यो अवसर पाएकै छैन। फिल्ममा पनि साल्सा नाच्ने रोल पाएँ भने अझै बेटर गर्न सक्छु। भिडियोमा पनि आफूलाई जमाउन सक्छु जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्म एउटा मात्रै फिल्ममा अफर आएको हो?दुइटा फिल्म गरिसकेँ। यसअघि 'सिग्नेचर' भन्ने फिल्म गरेकी थिएँ। तर, दर्शमाझ आउने चाहिँ 'अन्तराल' पहिलो हो। अरू धेरै फिल्मका अफर आइसके, तर हिरोसँग लभ गर्ने, अघिपछि लाग्ने खालका रोलमात्रै छन्। त्यो त सबैले गरेकै कुरा भयो नि। त्यसैले अलि फरक, अझ नेगेटिभ क्यारेक्टरमा अभिनय गर्न मन छ। अहिलेसम्म मेरो अनुहारमात्रै देखिएको छ, त्यस्तो रोल पाए क्षमता देखाउने अवसर पनि मिल्थ्यो। लभ फिल्मबाहिरै गरेको राम्रो भनेर फिल्ममा गर्न मन नपरेको हो?अहिलेको युगमा लभ गर्नु नर्मल कुरा हो। Tweet Leaveacomment Message *
निबन्ध : झेल्ला रेफ्रीब्राजिलले हार्दा एक किशोरीले आत्महत्या गरिन्। नेमार घाइते हुँदा सयौँ नौजवानलाई नराम्ररी दुख्यो। युरोपको जर्मनी र मध्य अमेरिकी अर्जेन्टिनासँग एसियालीको कुनै नसनातो र सम्बन्ध थिएन। तैपनि, मध्यरात–बिरात जाग्यौँ। भोक र...	ढँटुवी सुमिनापछिल्लो समय राम्रै चम्केकी अभिनेत्री सुमिना घिमिरेको चमक आफ्नै कारणले मधुरो हुँदै गइरहेको छ। केही समयअघि मात्रै पत्रकारलाई अश्लील गाली गरेर विवादमा आएकी उनी यतिबेला झुट बोल्ने हिरोइनका रूपमा चिनिएकी...	जहिले पनि तालीमात्रैएउटा कलाकारले अर्को कलाकारको तारिफ गर्न कन्जुस्याइँ गर्छन्। तर, माओवादी जनयुद्धको कथामा बनेको फिल्म 'उमा' हेरेपछि अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले ऋचा शर्माको मन खोलेरै तारिफ गरिन्। पछिल्लो समय नेपाली फिल्मका दर्शक...	बाफरे, हिप!मिकेल, डेनिस, मार्लेना र क्लाउडिया। यी चार महिला आफ्ना विशाल हिपका कारण संसारभर चर्चित छन्। उनीहरूका असामान्य रूपले चौडा नितम्बहरूको संयुक्त नाप हुन्छ– २७ फिट!	यसरी रोक्न सकिन्छ महामारीठूलो प्राकृतिक विपत्तिपछि सरुवा रोगको महामारी फैलिन सक्ने सम्भावना अधिक हुन्छ। भूकम्प तथा सुनामीजस्ता प्राकृतिक प्रकोप झेलेका धेरै देशमा यस्ता घटना देखिएका छन्। विशेषगरी प्राकृतिक विपत्तिका घटना व्यवस्थापन गर्न नसक्दा...	'परदेश' बनाउने कि 'प्रदेश' बनाउने?पूर्व शिक्षामन्त्रीज्यूले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, "कति परदेश बनाउने भन्ने निर्णय पार्टीहरूले गर्ने हो। राष्ट्रपतिले बोल्ने कुरा होइन।" मलाई उहाँको राजनीतिक विचारप्रति कुनै टिप्पणी गर्नु छैन। भाषिक टिप्पणी नगरी मनमा शान्ति...	अशुभ हुँदै यात्रायही कात्तिक १५ गते मकवानपुरमा दुई रात्री बस ठोक्किँदा १० जनाको मृत्यु भयो। काठमाडौँबाट विराटनगर जाँदै गरेको ना. ४ ख ५४४८ नम्बरको बस र इलामबाट काठमाडौँ आइरहेको ना.५ ख ४८४१...	शुक्रबार सम्पादकीय : 'अपग्रेड' र 'काँटछाँट'को भद्दा ठट्टासत्ता साझेदार एवम् संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिनयता दिएका अभिव्यक्तिले नयाँ संविधान लेख्ने काम राजनीतिक दलका लागि भालुको कनपट हुँदै गएको छनक पाउन...	शुक्रबार	'शृंगारले आत्मविश्वास बढाउँछ'शृंगारमा प्रयोग हुने फेसियल प्रोडक्ट 'आस्टाबेरी'ले नेपाली बजारमा आफ्नो हिस्सा जमाउँदै आएको छ। भारतीय उत्पादन आस्टाबेरीको...	बजेटपछि बिरामीजेठको धूप थेगिसाध्य थिएन। शीतल ताप्नेहरूले चौतारी खचाखच थियो। खेतमा डढेका मकै, सुक्दै गएका पानीका मुहान,...	बजेटपछि बिरामीजेठको धूप थेगिसाध्य थिएन। शीतल ताप्नेहरूले चौतारी खचाखच थियो। खेतमा डढेका मकै, सुक्दै गएका पानीका मुहान,...	एकताको लड्डुपछि फलामको च्यूराएकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो पुरानो स्वरूपलाई ध्वस्त गरेर नयाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा रूपान्तरण भएको घोषणा...	भर्खरै...